कहाँ छ स्वास्थ्य मन्त्रालय? कहाँ छन् स्वास्थ्य मन्त्री? :: प्रवीण ढकाल :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
प्रवीण ढकाल बुधबार, जेठ १४, २०७७, १८:२३:००
तर उनले ठट्टा होइन, साँच्चै नै आफूलाई यो देशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छैन झैं लागिरहेको बताए। 'देशभरका नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मा लिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय विपद्को यो घडीमा समेत कहीँ कतै देखिँदैन भने मन्त्रालय हुनु र नहुनुको के अर्थ?', उनका आक्रोश र प्रश्न मिसिए।
कोरोना संक्रमितको संख्या थपिँदै जाँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सहयोग त के, आश्वासन समेत नपाएको भन्दै उनले चिन्तामिश्रित स्वरमा निष्कर्ष सुनाए- 'यस्तो पाराले कोरोना विरुद्धको लडाइँ जित्न सकिँदैन।'
तर सबैभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्ने र देखिनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल 'गुमनाम' जस्तै छन्।
मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पुगेर कुराकानी गर्ने क्रममा 'मन्त्रालय हरेक दिन सबा ४ बजे प्रत्यक्ष प्रसारणमा र नयाँ संक्रमित थपिएपछि अद्यावधिक विवरण सहित देखिने गरेको, यो बीचमा मन्त्रालयले थुप्रै गाइडलाइन र प्रोटोकल समेत बनाएकाले गुमानाम भन्न मिल्दैन' भनेर तर्क गर्ने कर्मचारी पनि भेटिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपचार प्रोटोकल बनाएको दाबी गरे पनि कोरोना उपचारमा खटिएका अस्पतालका चिकित्सकहरु नै भन्छन्- 'हामीले उक्त प्रोटोकल देखेका छैनौं।'
उनीहरु भन्छन्- 'हामीले जानकारी पाएको एउटा मात्र कुरा छ। त्यो हो- संक्रमितको पछिल्लो दुई पटकको पिसिआर परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आए डिस्चार्ज गर्नुपर्छ।'
लामो समय मौन रहेका मन्त्री ढकालले वैशाख १ गते सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘६ टी’ को रणनीति लिएर कोरोना नियन्त्रण गर्न काम गरिरहेको बताए। कोरोना नियन्त्रणका लागि अघि सारिएका ६ टी अर्थात 'ट्राभल रेस्ट्रिक्सन', 'टेस्टिङ', 'ट्रेसिङ', 'ट्र्याकिङ', 'ट्रिटमेन्ट' र 'टुगेदर' हुन्। तर यो सबै रणनीतिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको कामको गति र संवेदनशीलता निराशाजनक छ। यी कुनै पनि कुराको कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले सकेको अवस्था छैन।